Toltec အနုပညာ, ပန်းပုနှင့်ဗိသုကာပညာ
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု ကိုလံဘတ်စခင်မှာ
အဆိုပါ Toltec ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကို 900 1150 မှအေဒီကနေ Tula ၎င်း၏မြို့တော်ကနေဗဟိုမက္ကစီကိုလွှမ်းမိုး။ အဆိုပါ Toltecs စစ်ရေးအရသူတို့၏အိမ်နီးချင်းများကြီးစိုးလျက်အခွန်ဆက်တောင်းဆိုသူတစ်ဦးစစ်သည်တော်ယဉ်ကျေးမှု, ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ဘုရား ပါဝင်သည် Quetzalcoatl , Tezcatlipoca နှင့် Tlaloc ။ Toltec သိမ်းသွားလေ၏ကျွမ်းကျင်လက်သမား, အိုးနှင့် stonemasons ခဲ့ကြသည်သူတို့အနေနဲ့အထင်ကြီးအနုပညာအမွေထားခဲ့လေ၏။
Toltec အနုပညာအတွက် motif
အဆိုပါ Toltecs သိမျးပိုကျမြားနှငျ့ယဇျပူဇျောတောင်းဆိုသူကိုမှောင်မိုက်, ရက်စက်သောဘုရားတို့ကိုအတူစစ်သည်တော်ယဉ်ကျေးမှုခဲ့ကြသည်။
သူတို့ရဲ့အနုပညာကဒီရောင်ပြန်ဟပ်: ဘုရား, စစ်သူရဲများနှင့် Toltec အနုပညာယဇ်ပုရောဟိတ်၏များစွာသောပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုရှိပါတယ်။ အဆောက်အဦး4မှာတစ်ဦးကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျက်ဆီးခံရကယ်ဆယ်ရေး Quetzalcoatl အများစုဖွယ်ရှိယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးအမွေးတောင်မြွေအဖြစ်ဝတ်ဆင်သောသူတယောက်ကိုဦးတည်ဦးဆောင်နေတဲ့စီတန်းသရုပ်ဖော်သည်။ Toltec အနုပညာကျန်ရစ်သူ၏ဆုံးအထင်ကရအပိုင်းအစ, Tula မှာလေးခုအကြီးအကျယ် Atalante ရုပ်ပွားတော်သည်atlátl DART တစ်ခုမှာအပါအဝင်ရိုးရာလက်နက်များနှင့်လက်နက်နှင့်အတူအပြည့်အဝ-သံချပ်ကာသူရဲ, ပုံဖော်။
အဆိုပါ Toltec ၏လုယက်
ကံမကောင်းစွာပဲအများကြီး Toltec အနုပညာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်, မာယာနဲ့ Aztec ယဉ်ကျေးမှုထဲကနေအများကြီးအနုပညာယနေ့တိုင်ရှင်သန်နေဆဲတိုင်အောင်, ဧရာမဦးခေါင်း များနှင့် အခြားအပန်းပု ၏ ရှေးဟောင်း Olmec နေဆဲတန်ဖိုးထားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Aztec, Mixtec နှင့်ဆင်တူသည့်အခြေအနေမဆို Toltec တိကျမ်းစာ၌လာသည်မှတ်တမ်းများ, မာယာ codices , အချိန်မှပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်စပိန်ယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းကို 1150 အေဒီတွင်, Tula ၏အားကြီးသော Toltec မြို့အမည်မသိမူရင်းကျူးကျော်နှင့်များစွာသောပန်းချီကားများအားဖြင့်ဖကျြဆီးခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အနုပညာအသေးစိတ်အပိုင်းပိုင်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Aztecs မြင့်မားသောကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက် Toltecs ကျင်းပများနှင့်အခါအားလျော်စွာကြောကျခဲပန်းပုနှင့်အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်အခြားအပိုင်းပိုင်းချွတ်သယ်ဆောင်ရန် Tula ၏အပျက်အယွင်းဝင်ရောက်စီးနင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခေတ်သစ်နေ့ကိုလိုနီခေတ်ကာလကနေလုယက်သူများမှောင်ခိုဈေးကွက်အပေါ်ရောင်းရန်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခိုးယူခဲ့ကြသည်။ ဒီမြဲယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီးခြင်း၏ကြားမှ, Toltec အနုပညာအလုံအလောက်ဥပမာသူတို့ရဲ့အနုပညာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာထေူဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ချက်ချင်းဗဟိုမက္ကဆီကိုအတွက် Toltec ရှေ့ပြေးသောအလွန်ကြီးစွာသောယဉ်ကျေးမှုTeotihuacán၏အားကြီးသောမြို့၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းကို 750 အေဒီမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများ၏ကျဆုံးခြင်းပြီးနောက်, Teotihuacanos ၏သားစဉ်မြေးဆက်အများအပြား Tula ၏တည်ထောင်နှင့် Toltec ယဉ်ကျေးမှုပါဝင်ခဲ့။ သို့အတွက်ကြောင့် Toltecs ဗိသုကာလက်ရာမြောက် Teotihuacan ကနေအကြီးအကျယ်ချေးကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကစတုရန်းအလားတူပုံစံထွက်ပြီးလျှင်, Tula မှာပိရမစ်ကို C, အရေးအပါဆုံးတဦးတည်း, အရှေ့ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့အသက် 17 °သှဖေပြောဖြစ်သောTeotihuacánမှာသူများကဲ့သို့တူညီသောတိမ်းညွတ်ရှိပါတယ်။ နေသည် Toltec ပိရမစ်များနှင့်ဘုံဗိမာန်ရောင်စုံခြယ်သကယ်ဆယ်ရေးပန်းပုခေါင်မိုးတက်ကိုင်ပြီးအဖျားအနားမှာနှင့်အားကြီးသောရုပ်ပွားတော် adorning အတူအထင်ကြီးအဆောက်အဦးများဖြစ်ကြသည်။
အိုးတဖဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, နဂိုအတိုင်းပေမယ့်အများအားဖြင့်ကျိုးအချို့ကို Tula မှာတွေ့ပါပြီ။ ဤအပိုငျးပိုငျး၏အချို့ဝေးဝေးလံသောမြေများအတွက် လုပ်. ခဲ့ကြသည် ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အခွန်ဆက်မှတဆင့်ရှိပါတယ်ယူဆောင် ပေမယ် Tula ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အိုးစက်မှုလုပ်ငန်းခဲ့ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ပိုင်းတွင် Aztecs Toltec သိမ်းသွားလေ၏ကြောင့်ဟုဆိုကာ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများအလွန်အမင်းထင် "မုသာဖို့ရွှံ့သင်ပေးတယ်။ " အဆိုပါ Toltecs ပြည်တွင်းရေးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပို့ကုန်များအတွက် Mazapan-type အမျိုးအစားအိုးထုတ်လုပ်: Plumbate နှင့် Papagayo Polychrome အပါအဝင် Tula မှာရှာဖွေတွေ့ရှိသည်အခြားအမျိုးအစားများ, တခြားနေရာထုတ်လုပ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အခွန်ဆက်မှတဆင့် Tula ရောက်လာခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Toltec အိုးထူးခြားတဲ့မျက်နှာများနှင့်အတူအပိုင်းပိုင်းအပါအဝင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး, ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Toltec အနုပညာများ၏ကျန်ရစ်သူအပိုင်းပိုင်းအားလုံး၏သည်ပန်းပု, ကျောက်ပန်းပုအချိန်စမ်းသပ်မှုအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလုယက်၏ကြားမှခုနှစ်, Tula ကျောက်ထိန်းသိမ်းထားရုပ်ပွားတော်နဲ့အနုပညာအတွက်ကြွယ်ဝနေသည်။
Atalantes: Toltec အနုပညာဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးလူသိများကျန်ရစ်သူအပိုင်းအစ Tula မှာပိရမစ် B ကိုထိပ်ကြေးဇူးအားဖွငျ့အရာလေးပါး Atalantes, ဒါမှမဟုတ်ပိတ်သောကျောက်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအရပ်ရှည်ရှည်လူ့ရုပ်ပွားတော်အဆင့်မြင့် Toltec သူရဲကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Chac Mool: ခုနစ်ပြည့်စုံသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Chac Mool စတိုင်ရုပ်ပွားတော် Tula မှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပန်းပုတစ် receptacle ကိုင်ပြီးတစ်လျောင်းသောသူသည်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့, လူ့ယဇျပူဇျောအပါအဝငျယဇျပူဇျောများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Chac Mools Tlaloc များ၏အစွန်းရောက်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် Friezes: အဆိုပါ Toltec ကသက်သာခြင်းနှင့် friezes ရောက်လာသောအခါကြီးမြတ်အနုပညာရှင်တွေခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျန်ရစ်သူဥပမာ Tula ၏ Coatepantli သို့မဟုတ် "မြွေ၏အမှတ်တရ" ဖြစ်တယ်။ မြို့သန့်ရှင်းသောပရိဝုဏ် delineated သောပီပီနံရံ, ကြွယ်ဝစွာဂျီဩမေတြီဒီဇိုင်းများနှင့်အတူအလှဆင်နှင့်လူ့အရိုးစုလောင်မြွေ၏ရုပ်ပုံများကိုထွင်းထုထားသည်။ အခြားအသက်သာနှင့် friezes တစ်ချိန်က Quetzalcoatl ၏ဖြစ်ကောင်းယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးထွက်လာသည့်အပူရှိန်သည်မြွေအဖြစ်ဝတ်ဆင်သောသူ, ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့စီတန်းပုံဖော်ထားတဲ့ Tula မှာ4တည်ဆောက်ခြင်းကနေတစိတ်တပိုင်း frieze ပါဝင်သည်။
> ချားလ်စ်မြစ်အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Toltec ၏သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ Lexington: ချားလ်စ်မြစ်အယ်ဒီတာများ, 2014 ။
> Cobean ရောဘတ်အိပ်ချ်, အဲလစ်ဇဘက် Jimenez Garcia နှင့် Alba Guadalupe Mastache ။ Tula ။ မက္ကစီကို: Fondo က de Cultura စီးပွားရေး, 2012 ။
> Coe မိုက်ကယ် D နှင့် Rex Koontz ။6Edition ကို။ နယူးယောက်: Thames နှင့် Hudson, 2008
> ဒေးဗီးစ်, Nigel ။ အဆိုပါ Toltecs: Tula ၏ကျဆုံးခြင်းအချိန်အထိ။ -Norman: ဥက္ကလာဟိုးမားစာနယ်ဇင်း, 1987 တက္ကသိုလ်။
> Gamboa Cabezas, လူး Manuel ။ "အယ်လ် Palacio Quemado, Tula: Seis Decadas က de Investigaciones ။ " Arqueologia Mexicana XV-85 (မေလဇွန်လ 2007) ။ 43-47
စန်း Lorenzo ၏ Olmec စီးတီး
Pakal ၏ Sarcophagus
အဆိုပါလေးဦးမာယာ Codices အသက်ဆက်ရှင်သန်ခြင်း
ရှေးဟောငျးအီမာယာ၏ Timeline ကို
ရှေးဟောငျးအီ Toltecs အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ရှေးဟောငျးအီ Olmec အကြောင်းအချက်အလက်
အမ်း Coulter Quotes
Serial Killer အက်ဒွပ် Gein ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
Nucleation အဓိပ္ပာယ် (ဓာတုဗေဒနှင့်ရူပဗေဒ)
UIC GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
- လွတ်လပ်သောအလေ့အကျင့်အဆင့် # 6: တစ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း
စက်ရုံနှင့်တိုက်ရိုက် Oak တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း - တိုက်ရိုက် Oak စီမံခန့်ခွဲရန်
စေရ်ဗန်းတေ့နှင့်ရှိတ်စပီးယား: ခေတ်တစ်ခေတ်ဘဝပုံစံ, ကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်များ
ဟေ့ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေ: သင်နှင့်ကောလိပ်မှယူခဲ့မပေးနိုင်နိုင်သလား 12 အံ့သြစရာအရာ
ပွငျသစျထဲတွင် conjugation '' Partir '(Leave ရန်)
ကျနော်တို့နှိမျ့ခခြွငျးကိုတိုးဖို့လိုအဘယ်ကြောင့် 10 အရေးကြီးအကြောင်းရင်းများ
သဘာဝရွေးချယ်ရေးအမျိုးအစားများ - Disruption ရွေးချယ်ရေး
ရေနံဒိုင်နိုဆော မှစ. လာကြသလား
ယုဒလူတို့ Sukkot အခမ်းအနားကျင်းပဘယ်လို
"အဘယ်သူမျှမတစျခုမှာဒီ Meddlesome ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ငါ့ကိုပယ်ရှားမည်?"
Konrad Zuse နှင့်ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာများ၏တီထှငျခဲ့
Ashta Samskara: ကျမ်းပိုဒ်၏ရှစ် RITES ၏ပုံများ